Yakachipa SBB Chitima Tiketi Uye Yekufamba Nzira Nzira Mitengo | Save A Train
Yakachipa SBB Chitima Tiketi Uye Yekufamba Nzira Nzira Mitengo
musha > Yakachipa SBB Chitima Tiketi Uye Yekufamba Nzira Nzira Mitengo
Pano unogona kuwana ruzivo rwese nezve Akachipa SBB matikiti ezvitima uye SBB mitengo yekufamba uye zvakanaka.
Topics: 1. SBB neTrain Highlights
2. Nezve SBB 3. Wepamusoro Insights Kuti Utenge Yakachipa SBB Chitima Tiketi
4. Yakawanda sei matikiti eSBB anodhura 5. Maitiro Ekufamba: Sei zvirinani kutora SBB zvitima, uye kwete kufamba nendege
6. Ndeupi mutsauko uripakati peSystem, Zuva Rokupfuura, uye Supersaver paSBB 7. Pane here kunyoreswa kweSBB
8. Inguva yakareba sei isati yasimuka yeSBB kusvika 9. Ndeapi maSBB ezvirongwa zvechitima
10. Ndeapi matereji ezvitima anopihwa neSBB 11. SBB FAQ
SBB neTrain Highlights
The Swiss Federal Njanji, SBB, ndiyo yenyika njanji kambani inoshanda muSwitzerland.
Zvitima zveSBB zvinotaridzwa kumusoro kwenzira dzenyika dzezvitima muEurope, uye mukati 2017 yaive yekutanga chinzvimbo chehunhu hwebasa, kuchengetedza chinzvimbo, uye performance index.
25 mamirioni vafambi vanofamba neSBB zuva nezuva.
SBB chitima sevhisi ndeimwe yeanonyanya kubata nguva masevhisi epasi, nezvishoma pane 3 miniti 'kunonoka paavhareji.
Yakareba kwazvo SBB mugero wechitima, iyo Gotthard Base tunnel, mu Swiss Alps, matanho 57.1 makiromita uye inogadzira rekodhi repasirese.
SBB ine 3 mitauro yepamutemo: ChiJerimani, ChiFrench, uye chiItaly. saka, SBB chiteshi chezvitima chakatumidzwa mazita uye chakamisikidzwa zvinoenderana nenzvimbo: mazita ezviratidzo nezviratidzo mumaguta ane mitauro miviri zviri mumitauro yese yemuno, uye nei iwe uchiona zita racho dzimwe nguva seizvi SBB CFF FFS.
SBB ibasa reSwitzerland rechitima iro nderimwe remhando yepamusoro pasirese.
Iyo yenyika yeSwitzerland SBB njanji kambani inoshanda muSwitzerland yese, ne 798 chitima dzemapurisa, uye 721 matikiti ezvitima mapoinzi ekutengesa. SBB njanji kambani iri yehurumende-kubva Ndira 1, 1999, zvichireva iyo federal state inobata 100% yezvikamu.
Enda ku Sevha Iyo Chitima Yeji kana kushandisa iyi yejeti kutsvaga anodzidzisa matikiti eSBB
Wepamusoro Insights Kuti Utenge Yakachipa SBB Chitima Tiketi
nhamba 1: Tora matikiti ako eSBB pachine nguva sezvaunogona
SBB matikiti ezvitima anowanikwa online kusvika 60 mazuva pamberi pezuva rako rekufamba. Paunoraira matikiti ezvitima nguva isati yakwana, unowana matikiti anodhura uye akadhura eSBB matikiti ezvitima mashoma. Uyezve, Mitengo yetikiti reSBB inokwira sezvo zuva rako rekufamba roswedera, saka kuitira chengetedza mari pane yako SBB chitima tikiti kutenga, tora matikiti ako echitima pamberi. Kuchengetedza mari paSBB matikiti ezvitima, tenga matikiti ako mangwanani.
nhamba 2: Kufamba neSBB panguva yekusiya-yepamusoro nguva
SBB matikiti ezvitima ari yakachipa panguva yekusiya-yepamusoro, pakutanga kwesvondo, uye masikati. Iwe unogona kuve nechokwadi chekuwana isingadhuri chitima matikiti mukati mevhiki. Musi weChipiri, Chitatu, neChina, SBB matikiti ezvitima ndiwo akanyanya mari. Nekuda kwehuwandu hwe mabhizimisi vafambi kuenda kubasa mangwanani nemanheru, matiketi echitima anodhura akawanda. saka, zvakachipa kwazvo kufamba chero nguva pakati pemasikati nemanheru. Kupera kwevhiki ndiyo imwe nguva yepamusoro yezvitima, kunyanya neChishanu uye Mugovera. SBB tikiti tikiti mitengo inowedzerawo pa zororo revanhu uye zororo rechikoro.
nhamba 3: Odha matikiti ako eSBB kana iwe uine chokwadi nezve yako yekufamba nguva
SBB zvitima vari kudiwa zvakanyanya, uye chete 2 mamwe makambani enjanji semakwikwi, ivo parizvino vanoramba vari sarudzo yepamusoro yezvitima muSwitzerland. Ivo vanokwanisa kukwanisa kumisa zvitambi zvechitima senge izvo zvavanazvo zvinorambidza kuchinjanisa matikiti kana kudzoserwa kunze kwekunge iri iro Bhizinesi remhando yetikiti.. Kunyangwe hazvo pachine mawebhusaiti iwe paunogona kutengesa matiketi ako ruoko rwechipiri kuvanhu, SBB haibvumire kutengesa-kwechipiri-tikiti kutengesa. Izvi zvinokubatsira sei kuchengetedza mari? Ronga tikiti rako chete kana uine chokwadi nezvechirongwa chako chinogona kukuchengetedza kubva kubhuku rimwe chete tikiti nekuti chimwe chinhu chakauya uye haugone kushandisa litikiti rekare.
nhamba 4: Tenga matikiti ako eSBB paSave A Train
Sevha Chitima chine chikuru, zvakanakisa, uye zvakachipa zvinodhura matikiti ezvitima muEurope. Kubatana kwedu nevazhinji vafambisi vechitima, masitiketi echitima, uye kuziva kwedu tekinoroji maalgorithms anotipa mukana kune zvakachipa zvechitima tikiti matikiti. Isu hatisi kungopa zvakachipa matikiti etikiti ezvitima zveSBB chete; isu tinopa zvakafanana kune dzimwe nzira dzeSBB.
Lyon kuBasel Chitima Mitengo
Paris kuBasel Chitima Mitengo
Lucerne kuenda kuBasel Chitima Mitengo
Yakawanda sei matikiti eSBB anodhura?
Matikiti eSBB anotanga kubva ku € 12.50 kusvika pakukwira kunge € 125 parwendo rwechitima chimwe chete. The mutengo weSBB chitima tikiti zvinoenderana nemhando yetikiti, rwendo, uye paunosarudza kufamba:
Standard € 12.50 – € 35 € 28 – € 55
Chekutanga Kirasi € 50 – € 95 € 50 – € 125
Maitiro Ekufamba: Sei zvirinani kutora SBB zvitima, uye kwete kufamba nendege
1) Iwe Unosvika pa Guta Center. Iyi ndiyo imwe mukana weSBB zvitima kana ichienzaniswa nendege. SBB zvitima uye zvese zvimwe kufamba kwechitima kubva chero kupi muguta kusvika pakati peguta rinotevera, doesn’t matter if it is a kuchengetedza nzvimbo kana musha. Izvo zvinokuchengetedza iwe nguva uye mutengo wekeji kubva kuairport kuenda kuguta. Nezitima zvinomira, zviri nyore kuti uende chero kupi zvako muguta rauri kuenda. Hazvina basa kuti uri kubva kupi uchibva, Geneva, muBasel, Zermatt, kana Zurich, Guta rinomira pakati ibasa rakakura rezvitima zveSBB!
2) Kufamba nendege zvinoda kuti uve panhandare yendege maawa akati wandei nguva yako isati yakwana. Iwe unofanirwa kuenda kuburikidza nekuchengetedzwa cheki usati wabvumidzwa kukwira mundege. Nezvitima zveSBB, iwe unongofanirwa kunge uri pachiteshi pasingasvike awa pamberi uye dzimwe nguva kunyangwe zvishoma. Kana iwe ukafungawo nezvenguva iyo zvinotora iwe kuenda kubva kuairport kusvika pakati peguta, iwe unozoona kuti SBB zvitima zviri nani maererano nehuwandu nguva kufamba.
3) Pamusoro, mutengo weSBB matikiti ezvitima anoita kunge anodhura kupfuura bhajeti matikiti emhepo. zvisinei, kana uchienzanisa zvese zvinopomerwa zvinosanganisira, SBB matikiti ezvitima ane mutengo uri nani. Nezvimwe mutengo semabhadharo echikwereti aunofanirwa kubhadhara kuzvitima, kufamba neSBB ndiye akanakisa.
4) Zvitima zvine hushamwari zvakatipoteredza. Mukufananidza pakati pezvitima neendege, zvitima zvaizogara zvichibuda pamusoro. Ndege dzinosvibisa pasi zvakanyanya neakakwira kabhoni uye co2 yavanopa. Zvitima mukuenzanisa kushandiswa ndoda Carbon tsoka pane ndege.
Chur kuenda kuThusis Chitima Mitengo
Zurich kuChur Chitima Mitengo
Geneva kuChur Chitima Mitengo
Ndeupi mutsauko uripakati peSystem, Zuva Rokupfuura, Saver Day Pass, uye Supersaver paSBB?
SBB ine mhando dzakasiyana dzematikiti emabhajeti akasiyana uye mhando dzevafambi: ingave yebhizinesi kana nhandaro. Iwe unogona kuve nechokwadi chekuti imwe yematiketi aya anokodzera iwe.
Yakawanda SBB Tiketi:
The Tikiti yakajairwa yeSBB ndiyo inonyanya kuchinjika pane ese matikiti eSBB. Iyi tikiti yechitima ndeyeye point-to-point 1 nzira kana kutenderera. Nemamwe mashoko, iyo SBB yakajairwa tikiti ndiyo yakasarudzika yekufamba kadhi. Chikurukuru, ino tikiti rechitima rinoshanda kuzuva rese rawakasarudza panguva yekutenga, uye kusvikira 5 ndiri zuva rinotevera. Pamusoro pe, unogona kutenga tikiti yeSBB yekunongedza-kune-poindi yekirasi yekutanga neechipiri. Imwe bhenefiti huru yeiyo poindi-kune-poiti matikiti ndeyekuti vana kusvika zera 6 famba wakasununguka. Nemamwe mashoko, unogona kuenda chero kwaunoda uye pane chero kirasi, parwendo rwako kubva kuA kuenda kuB.
SBB Day Pass uye Saver Day Pass Mitikiti:
Ndiine Saver Day Pass kadhi rekufamba, unogona kubhadhara zvishoma se- € 27 parwendo. Tikiti reZuva Pass rinowanikwa chete kana iwe ukavawana pamberi, hazviwanikwe pachiteshi chezvitima, sekutanga 60 mazuva usati waenda zuva rako. Iwe unogona zvakare kuraira iyi mhando yetikiti tikiti zuva risati rasvika. Uyezve, iyo Saver Day Pass tikiti inoshanda kune zvikepe, mabhazi, kana nzendo dze tramu.
SBB Supersaver Mitikiti:
Iyi kirasi yetikiti haina kusanduka senge Standard SBB chitima tikiti, asi yakachipa pane mamwe matikiti echitima. Iyo Supersaver SBB Tiketi inopa kusvika 70% dhisikaundi pane zvakajairwa matikiti. Kupesana neyakajairwa tikiti tikiti, mhando iyi yetikiti inopa mubhadharo wakaderera pane yakasarudzika rwendo kubva kuA kuenda kuB. Zvinoreva, haugone kukwira uye kudzika pane chero chiteshi, kunze kwezviteshi zvawakafanotangisisa.
Iyo Day Pass yekufambisa kadhi inokupa iwe kuchinjika pazuva rekufamba. Nemamwe mashoko, unogona kufamba chero nguva yaunoda, pazuva rekubva zuva.
Pane here kunyoreswa kweSBB?
Vagari vemuMunharaunda chete ndivo vanogona kutenga iyo GA kadhi rekufambisa, inova iri kadhi rimwe chete rezvose. Iyo GA yekufambisa kadhi inoshanda pa zvese zvekufambisa zveveruzhinji muSwitzerland.
Unogona kuitenga pa:
– SBB tikiti kuverenga.
– PaSBB yemuno vatengi 848 44 66 88
– Kubva kuvashandi veSBB zvitima nemabhazi.
Familia GA Kufamba kadhi
Vana nevakuru vechidiki kusvika zera 16 uye vabereki vavo vanogona kunakidzwa nemhedzisiro paFamilia GA yekufambisa kadhi. Iri kadhi rinowanikwa kana nhengo imwechete yemhuri iine iyi SBB kadhi rekufambisa.
Vese vanobata Familia GA vanonakidzwa nemitengo yakadzikira kwazvo yeimwe GA kadhi rekufambisa. Pamusoro pe, mhuri inogona kusarudza kana ichishuvira kutenga iyo Familia GA yekirasi yekutanga kana yechipiri.
Kana uri 25 zvese zvine chekuita nekunakidzwa, uye ikozvino nekadhi rechinomwe, unogona kufamba zvisina muganho kubva 7 pm. Zvinoreva, Iri kadhi rekufambisa rinoshanda pakati 7 pm it 5 ndiri. saka, chinoshanda sei? Iwo manomwe25 akaiswa kune yako Swiss Pass yekufambisa kadhi uye iwe unogona kuishandisa kune chero kumira.
Basel kune Interlaken Chitima Mitengo
Geneva kuZermatt Chitima Mitengo
Bern kuZermatt Chitima Mitengo
Lucerne kuenda kuZermatt Chitima Mitengo
Inguva yakareba sei isati yasimuka yeSBB kusvika?
Kuti utore yako SBB uye ive chaiyo panguva, iyo njanji inokurudzira kuti iwe unosvika 1 awa Chitima chako cheSBB chisati chasimuka. Isu paSave A Chitima kubva patakafamba zvakanyanya pazvitima zveSBB, kukurudzira kusvika 30 maminitsi pamberi, saka haufanire kumhanyisa nepakati pezviteshi zvechitima kuti ubate chitima. Pamusoro pe, awa inokwana nguva yakakwana yekunakidzwa nezvitoro nemastandi ezvokudya uye uwane izvo zvinhu zvaunoda zve rwendo rwechitima kuti uve wakasununguka sezvinobvira.
Ndeapi maSBB ezvirongwa zvechitima?
Unogona kuziva mune chaiyo-nguva yedu peji rekutanga pane Sevha Chitima. Ingo nyora munzvimbo yako ikozvino uye kwaunoda kuenda, uye isu taizokuratidza iyo yakagadziridzwa ruzivo rweyechitima zvirongwa.
Ndeapi matereji ezvitima anopihwa neSBB?
Pane zvakapfuura 10 zviteshi zvinoshandiswa neSBB zvitima zvechitima.
Chiteshi cheZurich cheSBB chiri Zurich Central Station (Zita remuno ndiZurich HB). Ichi ndicho chikuru SBB chiteshi chechitima muZurich uye iri mumoyo weZurich, pedo Rwizi Limmat.
Bern ndiro guta guru reSwitzerland uye chiteshi chepedyo chechitima kuYunivhesiti yeBern muLanggasse Quarter.
MuGeneva Mazuva ano SBB zvitima ibva uye usvike kubva kuGeneva Central Station, pakati peguta.
muBasel SBB chiteshi ndicho chikuru muganho chiteshi muEurope. Ndokureva kuti Kubva kuSwitzerland, unogona kuenda kuGermany, Furanzi, Ositiriya, uye iyo Netherlands ine SBB chitima sevhisi. Chikurukuru, pane 50 zvitoro uye maresitorendi muBasel chiteshi, kwaunogona kutenga zvese zvaunoda zverwendo. Semuyenzaniso, unogona kutenga zvidyiwa uye zviyeuchidzo zvemaminitsi ekupedzisira. Kubva kuBasel SBB chiteshi, uye nhepfenyuro huru dzaunogona kufamba kuenda kuFrankfurt, Paris, uye Salzburg.
Vari Bikes Inobvumidzwa PaBhodhi iyo SBB Zvitima?
Mabhasikoro anotenderwa pazvitima zveSBB. Unogona kuvatengera tikiti pachiteshi, uye kunyoresa bhasikoro semukwende kana kuendesa kuchitima semutoro wemaoko.
Do Vana Vanofamba Mahara pane iyo SBB Zvitima?
Hongu mune dzimwe nguva, vakaperekedza vana vari pasi pemakore matanhatu ekufamba mahara. Pamusoro pe, vana kubva pamakore matanhatu, uye kusvika kune avo 16 zuva rekuzvarwa kufamba kwehafu-mutengo.
Ndezvipfuwo Zvinotenderwa paSBB Zvitima?
Ehe, imbwa dzinobvumidzwa sekureba sekunge ivo vari kufamba mune yemutakurwi crate kana mukwende van.
Ndeapi ma boarding maitirwo eSBB?
Iwe unofanirwa kusvika kuchiteshi zvirinani 1 awa nguva yekuenda kwechitima chako isati yasvika, uye ratidza chitupa kune muongorori wetikiti kuti aone.
Yakawanda Inokumbirwa SBB FAQ – Ndinogona here kuchengetera chigaro pamberi paSBB?
iwe kugona chengetera muchitima munhu ndinozivapa kufanoita kusvika kumusoro 5 vafambi pamutengo we € 5 pachigaro. zvisinei, kuchengetedza kwacho kunofanirwa kuve pasi pezita remunhu ari kufamba.
Iko kune yeWi-Fi sevhisi mukati meSBB?
Ehe. Unogona kunakidzwa Free Wi-Fi sevhisi pazvitima zvese zveSBB uye ese makirasi ekufamba kusvika 60 maminitsi.
Kana iwe wakaverenga kusvika panguva ino, unoziva zvese zvaunoda kuti uzive nezve ako SBB zvitima uye vakagadzirira kutenga yako SBB chitima tikiti pa Save A Train.
Iwe unoda here kubatidza peji ino kune yako saiti? Click pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-sbb%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code), Kana kuti unogona kungobatanidza zvakananga kune ino peji.